Sambo milentika, maro no maty tao amin'ny Farihy Mai-Ndombe any Inongo, Kongo
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sambo milentika, maro no maty tao amin'ny Farihy Mai-Ndombe any Inongo, Kongo
Ny mpizahatany dia tsy antenaina ho isan'ireo 30 maty any Andrefan'i Kôngô, izay misy 200 hafa tsy hita taorian'ny nilentehan'ny sambo iray tao amin'ny farihin'i Mai-Ndombe any Inongo, Kôngô Lake Mai-Ndombe dia farihy iray misy rano velona lehibe ao amin'ny Distrikan'i Mai-Ndombe any Bandundu Faritany ao amin'ny Repoblika Demokratika andrefan'ny Kongo. Ny farihy dia ao anatin'ny faritry Tumba-Ngiri-Maindombe, ilay faritra mando lehibe indrindra misy ny laharam-pahamehana iraisan'ny Ramsar Convention eto amin'izao tontolo izao.
Ireo sambo ao amin'ny firenena midadasika any Kongo dia mazàna dia feno mpandeha sy entana, ary ny lalàna ofisialy dia tsy tafiditra ao anatin'izany rehetra izany.
Nilaza i Simon Mboo Wemba, ben'ny tanànan'i Inongo, ny alahady alina fa maro amin'ireo izay niondrana an-tsambo nilentika tao amin'ny farihin'i Mai-Ndombe no mpampianatra. Nilaza ny ben'ny tanàna fa nanao dia lavitra izy ireo mba hanangona ny karamany tamin'ny sambo satria tena ratsy ny lalana any amin'ny faritra.
Tsy fantatra firy ny isan'ny olona tao anaty sambo rehefa tonga ny andro ratsy tamin'ny sabotsy lasa teo. Saingy tombanana ho tompon'andraikitra an-jatony ny isan'ny tompon'andraikitra. Maherin'ny 80 ny olona tafavoaka velona.
Tamin'ny volana aprily dia sambo iray hafa no nianjera tamin'ny farihy Kivu any amin'ny faritanin'i Kivu atsimo ao Kongo, ary namono olona 40 farafaharatsiny. Raha nilaza ny manampahefana kongoley fa olona 150 no tsy hita, ary olona 30 no voavonjy, ny isan'ny niharam-boina dia mbola tsy fantatra,
Sombin-tantara amerikana, kolontsaina taloha, morontsiraka fasika fotsy ary lavitra toy ny tsy misy toerana hafa?
8.0 Ny horohoron-tany dia mety hitranga any Però